Chalet ukonwabela Eldorado e Ardennes
Kule ndawo intle e-Ardennes, engekude ne-Netherlands, ngokukhawuleza ukwihlabathi elahluke ngokupheleleyo. Iintaba neentlambo ziyatshintshana needolophu ezintle ezinenkcubeko nolwimi lwazo. Ukusuka kwi-chalet ene-cosily, ebekwe kwintlambo apho umlambo i-Amblève kunye nomsinga we-Steinbach uhamba ngokuthe ngqo kwindalo kunye nehlathi. Indlu ijikelezwe yigadi ephangaleleyo enethafa elikhulu lelanga. Kukho ujingi omkhulu kunye nendlu yokudlala enomdla yabantwana abancinci.
I-chalet enefenitshala ecocekileyo isandula ukwenziwa ngokutsha, kukho indawo yabantu abayi-6. Isitovu sokhuni siphucula umoya, kukho indawo yokutyela ephangaleleyo enetafile enkulu eyongezelelweyo. Ikhitshi elitsha lixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye igumbi lokuhlambela lelanamhlanje kwaye lixhotyiswe ngeshawari yokuhamba-hamba ebanzi. Kukho indawo yokupaka yabucala yeemoto ezi-2. I-terrace inetafile enkulu yokutyela kunye nezitulo ezininzi zegadi. Endlwini kukho igadi enendawo yabucala eyaneleyo. Ibarbecue iyafumaneka.
Xa ungena apha ngokukhawuleza uziva usekhaya kwindawo ekhethekileyo ye-Ardennes. I-chalet inikwe ngokulula, kodwa ikhululekile kakhulu, igumbi lokuhlala lisandul 'ukulungiswa kwakhona, kunye nefenitshala, yonke into yanamhlanje kwaye ifakwe ngemibala efudumeleyo. Igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi nazo zisanda kulungiswa. Iziko kunye nesitovu seenkuni ziphucula umoya. Isilingi esithambekileyo kunye ne-mezzanine ukuya kumagumbi aphezulu anikezela umoya owongezelelekileyo kunye nobukhulu kwigumbi lokuhlala elinemilo engu-L, ngelixa indawo yokutya eyahlukileyo enetafile enkulu yokutyela yenza enye indawo ekhethekileyo. Ekujikelezeni kwendlu kukho umbono omhle kwigadi kunye neendawo ezingqongileyo kunye neentaka ezininzi kwaye rhoqo i-squirrel. Iingcango zepatio kwi-terrace ziyi-godsend, ngakumbi xa imozulu intle. Ikhitshi elitsha ligqityiwe kwaye kukho i-inventory enkulu yekhitshi ekhoyo. Ithafa elinetafile yokutyela eyomeleleyo enezitulo ezilungelelanisiweyo igubungela i-30 m2 kwaye igadi ebanzi yangaphambili ijonge emazantsi-ntshona kwaye inika ubumfihlo obuninzi, ukuze ukonwabele ilanga. Indawo yomlilo egadini inika umoya owongezelelekileyo. Kukho igadi esecaleni ejikeleze indlu enebhentshi apha naphaya ukuze uphumle okanye ufunde incwadi elungileyo. Kukho indawo yokupaka yabucala kwi-driveway, kunye nendawo yokupaka eyongezelelweyo ecaleni kwebhari. Kwindawo 'echulumancisayo' egadini kukho indawo yokudlala yabantwana ukuya kutsho kwiminyaka emithandathu kwaye kukho ujingi oluphindwe kabini lwabantwana abaselula kunye nabantwana. Endlini kukho indawo eyaneleyo abantu abayi-6. Kwi-barn uya kufumana i-barbecue kunye ne-sleds ezimbini.
Ngaphakathi kwendlu kukho igadi ephangaleleyo enethafa elikhulu, indawo yokucima umlilo kunye nengca eninzi yokudlala.
Igumbi elinobubanzi obume ngo-L elinesofa enezihlalo ezibini nezithathu kunye nesitulo sokuhlala. Ukufudumeza okuphakathi kunye neziko elipholileyo elinesitovu somthi.
Kwi-L yegumbi lokuhlala kukho indawo yokutyela ephangaleleyo enetafile elingana nenkosi yabantu aba-6 ukuya kwabasi-8.
Ikhitshi elitsha linekhitshi elikhulu, ifriji, i-inventory epheleleyo kunye nezitya ezaneleyo. Upheka ngegesi kwaye kukho i-oveni. Kumntu onomdla kukho iSenseo, kodwa kunye nomatshini wekofu oqhelekileyo. Igumbi lokuhlambela langoku elineshawa yokuhamba, indlu yangasese kunye nesitya sokuhlambela. Iholo ephangaleleyo. Igumbi lokulala elihle elinesibini elinebhokisi yebhokisi yabantu aba-2 kunye neengcango zepatio ngasemva kwendlu.
Iholo eliphangaleleyo elinerakhi eneebhutsi ezinobungakanani obahlukeneyo.
Amagumbi okulala amabini, elinye linebhedi elala abantu ababini kunye nelinye elineebhedi ezimbini zesingle. Kukho iiduvethi kunye nemiqamelo kuwo onke amagumbi okulala. Kufuneka uzibonelele owakho amagqubu, (ikhava) amaphepha, iipillowcases, iitawuli kunye neetawuli zeti.
Kuninzi ekufuneka kwenziwe kule ndawo. Kukho amathuba amaninzi okuhamba, kukho iindlela ezikhethekileyo zokuhamba ngebhayisikile, kodwa unokuhamba ngebhayisikili entabeni nakwiindlela ezikhethekileyo. Zininzi iikhosi zeebhayisekile. Unokuhamba ngehashe, ukukhwela inqanawa, ukukhwela i-rafting, njl njl. Ebusika kukho iindlela ezininzi zokunqumla ilizwe kwaye kukho i-ski slope enhle kakhulu enezinyusi ezikufutshane. Iidolophu kunye neelali ezikuloo ngingqi zineendawo zokutyela ezintle kwaye iindawo zokutyela 'ziphezulu' kodwa azibizi. Kukwakho neendawo ezininzi ezinomdla, ezinje ngemyuziyam, iinqaba, iindawo ezithengisa utywala, njl. njl
I-chalet ibekwe ngokuzolileyo kwiqela lezindlu zabucala ezi-7. Unokuhamba ngokuthe ngqo kwindalo ukusuka egadini. Ijikelezwe ngamahlathi, imilambo kunye nomlambo i-Amblève. Mganyana phambili kukho ilali encinci yaseOndenval. I-chalet ineendawo zayo ezibanzi (500 m2).
Apha unokunambitha ngokukhawuleza umoya okhethekileyo we-Ardennes. Kumgama ongekho ngaphezu kweekhilomitha ezingama-300 ngequbuliso ukwilizwe elahluke ngokupheleleyo. Indalo entle eneentlambo kunye neentaba, amahlathi acwengileyo, imilambo equkuqelayo kwaye ebusika ikhephu elininzi kakhulu kune-Netherlands. Indlu nayo ibekwe ngokulula kakhulu. Uhamba ngokuthe ngqo kwindalo, njengokuba kunjalo, ngenxa yendawo yayo kufuphi nomlambo i-Amblève, umlambo iSteinbach kunye neWolfsbusch enkulu.
Ukufumana incwadi elungileyo ungandwendwela ikhabhathi yethu yeencwadi. Kukho nemidlalo emininzi kwaye ungonwabela ibhiya elungileyo okanye iwayini ecaleni komlilo egadini. Kubantwana kukho into eninzi yokwenza kwi-swing, kwindlu yokudlala, kwindalo, ngomlambo, umlambo okanye ehlathini. Kwaye ukuba usafuna ukufunda i-imeyile yakho, yiya kwiCafé Terminus eMontenau okanye eLe Cyrano eWaimes, apho unokonwabela ibhiya emnandi yaseBelgian okanye iwayini egqibeleleyo yesiFrentshi ukongeza kwiWiFi yasimahla.
I-ARDENNES: Kwaye inkcubeko ekhethekileyo ye-East Cantons
Ukuhamba nje iiyure ezi-3 ukusuka kumbindi weNetherlands, uya kufika kwindawo eyahlukileyo ngokupheleleyo kunye nenkcubeko! Iinduli ezintle eziluhlaza kunye neentaba, amahlathi ashinyeneyo, iilali needolophu ezintle. Indlu yethu isekupheleni kwenye yezona ntlambo zintle kulo mmandla. Kumlambo we-Amblève we-trout kwaye ukhuselwe yi-Wolfsbusch enhle.
Kulo mmandla uya kufumana iindawo ezininzi ezahlukeneyo kunye neendlela. I-High Fens (iikhilomitha ezi-6) ngummandla wolondolozo lwendalo okhethekileyo kwaye omagingxigingxi. Ndwendwela iBaraque Michel kunye neMyuziyam yeNdalo ekufuphi.
IBelgium sele isaziwa ngokutya okumnandi kunye nolonwabo, kodwa e-Ardennes le ndlela yokuphila yaseBurgundi ithatha indawo engaphezulu. Iintlobo ngeentlobo zeemveliso, kuquka iwayini elungileyo, ziyafumaneka ezivenkileni. Okunye okukhethekileyo ziimveliso ezahlukeneyo zengingqi ezikumgangatho ophezulu, ezinje nge-trout evela e-Ondenval, iitshizi ezahlukeneyo zaseThirimont, i-Ardennes ham yaseMontenau, njl. Ngokukodwa umdlalo kwixesha lokuzingela akufanele uphoswe. Kumdlalo omtsha osuka eArdennes nase-Eifel ungaya kwiTraiteur eRobertville okanye ulungiswe ngokugqwesileyo kwindawo yokutyela yaseCyrano eWaimes. Kuyo yonke indawo kwiivenkile zokutyela uya kunikwa umgangatho ophezulu ngexabiso elifanelekileyo. Kwiindawo ezininzi zokuphumla ezipholileyo kunye neekhefi unokhetho olubanzi lwazo zonke iibhiya zaseBelgian zimnandi. Zama i-Kwak yomqeqeshi webhiya eCafé Scotch kwisikwere esikhulu eMalmedy okanye uye kwi-brewery entsha e-Bellevaux (4 km). Okanye uye kwiMyuziyam yeBeer eRodd kufuphi neSt. Kwaye ke ulwimi! Indlu yethu ibekwe kanye kumda weelwimi phakathi kweWalloon kunye nommandla wokuthetha isiJamani (iiCanton zaseMpuma).
Musa ukuxhatshazwa ngamaFrentshi. Kule mihla, abahlali benza konke okusemandleni abo ukukuphendula ngesiDatshi kwaye ukuba abaphumeleli, isiJamani okanye isiNgesi sihlala sibonelela ngesisombululo. Inkalo ekhethekileyo yenkcubeko yingqwalasela ye-Ardennes Offensive. Kufuphi eBaugnez yimyuziyam encinci enika ingqwalasela kwimpembelelo yayo kwindawo yaseMalmedy.
Unokonwabela ukungabikho mda kwindawo ekufutshane. Elinye lamahlathi amakhulu e-Ardennes, iWolfsbusch, imida ngokuthe ngqo kwindawo. Ithenisi, ukukhwela amahashe kunye nokukhwela ibhayisekile (kubandakanywa nokuqeshwa kweebhayisekile zasezintabeni) konke kuyenzeka. A uhamba elihle lo fairytale-ezifana emfuleni kwiingxangxasi ezininzi, i-Ninglinspo kufuphi Remouchamps (jonga iifoto). Xa kumgama km 4 iilali ezininzi ezintle ezifana Ligneuville, Montenau, Waimes, njl kufutshane Uya bafumane iindawo zokutyela, iiterraces ezintle, iikhefi kunye nemivalo.
Uhambo lwemini olukhudlwana lungenziwa eLiège, eAachen, eMonschau, eLuxembourg, eVianden, eLittle Switzerland, eBastogne, eLa Roche, njl. ukufikelela yakho ekhawulezileyo.. (I-spa, i-Remouchamps, i-Stavelot, i-Cascade de Coo, njl. njl.) Amadama okuqubha anokufumaneka eMontenau, e-Spa, e-St.vith nase-Robbertville. Kwi-15 km. Iziko lezemidlalo lamanzi elaziwayo "i-Worikken" lifumaneka kwiLake Bütchenbach (ukuhamba ngenqanawa, ukusefa, ukuqubha, izikhephe ezinyovwayo, njl. njl.) Ngamafutshane, unokuyonwabela ngokupheleleyo iholide yakho!
Indalo yeyona nto inomtsalane kwi-Ardennes. Kwaye kufanelekile, kuba le ndawo ibonelela ngendalo engachukunyiswanga kufutshane nekhaya!
Ukuphuma ngokukhawuleza kuvela ngokwemvelo kwi-Ardennes. Kukho uthungelwano oluxineneyo lweendlela ezinemiqondiso. Ezi ziyafumaneka kwisiza kwiofisi yabakhenkethi.
Iindlela ezihamba emahlathini okanye kwiilali needolophu ezintle. Ngokhetho oluninzi lwabakhenkethi abangenamava kodwa nakubantu abafuna uhambo olucela umngeni okanye uhambo olude. Ubume bendalo be-Ardennes bukwagqwesileyo kwi-kayaking, ukukhwela ibhayisekile entabeni, ukusinda, ukukhwela ihashe okanye igalufa.
Kutshanje, uthungelwano olubanzi lweendlela zokuhamba ngeebhayisikile, ezibizwa ngokuba yiRavel, zakhiwe ngaphezulu koololiwe bangaphambili. Ngenxa yoko, ukungafani kokuphakama akukho ngaphezu kwe-3% ukwenzela ukuba ukwazi ukuphuma ngokulula kunye nebhayisiki yaseDutch eqhelekileyo kunye neegesi ezi-3. Ukusuka kwindlu yethu unokujikeleza ngokulula ukuya eAachen, eMonschau, eSt. Vith nakumantla eLuxembourg. Kukwakho neendawo ezininzi ezintle ezisecaleni kwendlela yesiselo okanye isidlo sasemini. EWaimes unokuqesha iibhayisekile zombane.
Zokudla Nice kunye zokutyela apha e Montenau (Terminus, Simple kodwa elungileyo), Waimes (Cyrano, Class kodwa hayi imali eninzi; umdlalo ekwindla nasebusika), Malmédy (kuquka iivenkile zokutyela intlanzi, kodwa iBistro, ipizza, njalo njalo) kunye eSt Vith (uSteineweiher, nantsi umdlalo omangalisayo kwixesha lonyaka), kodwa unokuhambahamba kwihlathi laseRodd kwaye emva koko utye okanye usele into ethile kwiMyuziyam yeBeer (ebusika indlu yokutyibiliza kunye neparadesi yokutyibiliza ilizwe). Kufutshane kukho iiFen eziPhezulu. Endleleni eya apho uya kufumana isiselo esitsha sePeak Beer e-Ovifat, apho unokonwabela iintlobo ngeentlobo zeebhiya, izitya ezincinci ezimnandi, kunye nembono entle ngaphezulu kweeFeni eziPhakamileyo kwaye abantwana bakho banokuyonwabela ibala lokudlala lale mihla. Kwakhona ukufutshane eJamani kunye neendawo ezintle ezifana neMonschau kunye nazo zonke iidolophu ezintle e-Eifel, kodwa iLuxembourg nayo isiqingatha seyure kuphela.
E-Coo yipaki encinci yokuzonwabisa kunye neengxangxasi "iCascade de Coo".
Spa has a iziko nice, yekhasino kunye bath entle entsha thermal.
Ipaki enkulu yokonwabisa yiPhantasialand kufutshane neCologne.
Entsha yimyuziyam encinci yemfazwe enikezelwe kwi-Ardennes ekhubekisayo. Ikufutshane naseBaugnez.
Unokuloba i-trout kwindawo yethu e-Amblève (kodwa kuqala ufumane imvume kwiposi yaseWaimes), kodwa nakwichibi elikhulu lokuloba eRecht, elinendawo yokudlala.
Zininzi iindawo ezinomdla kwindawo ekufutshane nendlu. Reinhardstein Castle, Botrange Nature Park Centre, Spa / Franchorchamps Circuit, Stavelot Abbey, Stavelot Circuit Museum.
Kufuphi neRobertville, kwintlambo entle yomlambo iWarche, uya kufumana iReinhardstein Castle. Le nqaba yamaxesha aphakathi, yakhiwe ngokupheleleyo kumabhodlo, inokutyelelwa. Kukho ukhenketho olukhokelwayo kwi-Dutch rhoqo ngeempelaveki. Ukhenketho lwabucala (ngaphandle kweeyure eziqhelekileyo zokuvula) lungalungiselelwa amaqela.
Malunga neekhilomitha ezi-5 ukusuka kwi-chalet) yindawo yepaki yendalo ye-Botrange (eyona ndawo iphakamileyo kwi-Benelux; 694 ngaphezu kwe-NAP). Apha uya kufumana imbali epheleleyo yemvelaphi ye-Ardennes kunye ne-High Fens.
Njengoko sisazi, i-Ardennes yeyona ndawo indala yeentaba emhlabeni kwaye yakha yavela kwi-South Pole. Iziko lepaki yendalo linika umbono olungileyo wokuba iArdennes yaba yile nto bayiyo namhlanje.
Inkalo ekhethekileyo yenkcubeko yingqwalasela ye-Ardennes Offensive. Ukongeza kwimyuziyam ekhankanywe ngasentla eBaugnez, kukho ezinye iindawo ezininzi e-Ardennes, ngakumbi eBastogne ukuba imbali isabambekayo.
Ingqalelo abathandi begalufa!
Ikhaya leeholide libekwe kwindawo efanelekileyo kwiikhosi ezahlukeneyo zegalufa (i-Spa, iLiège, iZizwe ezi-5, iClervaux, iDurbuy, iHerstal, njl.). Zizifundo ezicela umngeni kwaye phantse kusoloko kukho indawo. Ukongeza, bahlala benezibonelelo ezintle, ezinje ngokudibanisa igalufa, i-buggy kunye nesidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa ngexabiso elinye!
Ukuhamba ngebhayisekile, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela ibhayisekile ezintabeni, ukuloba, ukutyibilika, ukutyibilika, ukutyibiliza, ukutyibiliza kunye nolonwabo ngakumbi ebusika:
Ngokuthe ngqo kwi-chalet ungakonwabela ukukhwela ibhayisekile ngaphandle kokwahluka okukhulu kobude. Umzekelo, kukho umjikelo omhle owahlukileyo kwindlela kaloliwe yangaphambili phakathi kweAachen, edlula eMonschau, eWaimes, eMontenau naseSt. Vith kwindawo entle yonke indlela eya eTrois Vierges kumantla eLuxembourg. Kungcono ukukhwela ukusuka kwindlu yethu yaseMontenau. Emva kwexesha ungaphumla apho kwindawo entle yokutyela kwiCafé Restaurant Terminus. Ungarenta iibhayisekile (kubandakanywa nezombane) kwi-AT-bike, 11 Rue Coirville eWaimes.
Kubakhweli beebhayisikile ngumceli mngeni wokwenene ukukhwela ibhayisekile ukuya eStavelot naseWanne. Kukwakho neStockau (ehlala iyinxalenye yeTour de France).
Kwindawo ungayonwabela ukuhamba ngebhayisekile entabeni. Ukuba awukwazi ukuzisa ezakho, ungazirenta naphina kufutshane.
Iindlela zeebhayisekile zeentaba ziphantse zingenamkhawulo kule nxalenye ye-Ardennes.
Ukuloba kwi-Ambléve, eyona ndawo ilungileyo kufutshane ne-chalet ingaphantsi nasecaleni kwebhulorho. Kukho ubutyebi beentlanzi; minnow, goby, chub, perch, brown and rainbow trout. Nangona kunjalo, kufuneka uqale ufumane iphepha-mvume lokuloba kwiPosi yaseWaimes.
Ebusika uhlala uzicingela kwindawo yezemidlalo yasebusika ejikeleze indlu, indawo yekhephu ihle kakhulu (jonga iifoto).
Ebusika, ukutyibilika kwe-ski kunye ne-sledding ihlala inokwenzeka kwi-chalet.
Iindlela ezahlukeneyo zokutyibiliza ekhephini (i-High Fens, iRodd, i-Baugnez, njl.) Ithambeka elingaphezulu noko (900 m) libekwe malunga neekhilomitha ezingama-40 eSchneeEiffel kufutshane nePrüm.
I-ski enqumlayo egijima kwi-Biermuseum e-Rodd nayo imnandi. Emva kokuhamba nge-skiing (kodwa nangemva kokuhamba ehlotyeni) unokonwabela isiselo kwaye utye apho.
Kukho ubumfihlo obaneleyo malunga ne-chalet. Kukho ezinye izindlu zeeholide ezimbalwa ezikufutshane. Abanye babo baqeshiwe. Abantu bayathanda ukuncokola kwaye abantwana badla ngokudlala kunye.
Akukho zahlulo zokwenyani, kodwa siyakucela ukuba uhloniphe indawo yokuhlala yabamelwane.
Ungasoloko usibiza ukuba uyasifuna.
Kukho ubumfihlo obaneleyo malunga ne-chalet. Kukho ezinye izindlu zeeholide ezimbalwa ezikufutshane. Abanye babo baqeshiwe. Abantu bayathanda ukuncokola kwaye abantwana badla ngoku…